Diyaarad xamuul ah oo Turkish ah oo Duulimaadyo ka Bilowday Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirMarkab xamuul oo Turkish ah ayaa ka bilaabay Duullimaadyada İzmir
18 / 05 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, TURKEY
xamuulka turkish wuxuu duulimaadyo ka bilaabayaa izmir
Shirkadda xamuulka ee Turkish Cargo (THY), oo ah nooca xamuulka qaada ee Turkish Airlines, oo gaartay heerkii ugu sareeyay ee koritaanka 25 ka mid ah kuwa xamuul qaada xamuul, ayaa qorsheynaya inay maalin kasta u duulaan magaalada İzmir maalin kasta 28ka Maajo.
Maareeyaha Guud ee Shirkadda Cargo ee Turkiga Turhan Özen, Madaxweyne kuxigeenka Shirkadda Iibka ee Ahmet Kaya, Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, Maamulayaasha gobollada Adana ayaa kajawaabey su’aalaha ku saabsan safarka xamuulka hawada ee dhoofinta khudradda cagaaran iyo khudradda, hannaanka faafa. qiimeeyay.
Madaxweynaha Ururka Aegean Fresh Fruda iyo Dhoofinta Qudaarta ee wax ka beddelay kulanka diyaaradda Hayrettin, ayaa kordhisay tirada duullimaadyada si loo daboolo dhammaan baahiyaha loo qabo dhoofinta xamuulka Turkiga ee inta lagu gudajiro coronavirus ayaa sheegay inay sii wadayso xalka wadaagga ah ee Turkiga ee soo-saareyaasha iyo dhoofinta.
In kasta oo xannibaadda safarka ee ay ugu wacan tahay cudurka 'coronavirus' ay yaraysay isu socodka diyaaradda rakaabka, waxay keentay cufnaanta dhinaca xamuulka xamuulka. Diyaaradaha xamuulka ka sokow, xamuulka waxaa sido diyaaraddaha rakaabka rakaabka ee THY. Iyada oo la yiraahdo Cargo Turkish, oo leh xamuulka ugu weyn ee xamuulka ugu weyn adduunka ee xamuul qaada, waxaan u soo dejineynaa qiimaheenna alaabooyin dheeri ah oo leh shelf aad u hooseeya waddamo badan. Qiimaha unugyada iyo ajuurada waxay noqon doonaan kuwa caqli gal badan maadaama tirada duullimaadyadu furmaan. Sanadka 2019, 6 milyan 213 kun oo doolar miro iyo khudaar daray ah ayaa lagu raray hawada iyaga oo lagu badeley 19 kun 761 tan oo badeecooyin ah. Dhoofinta miraha iyo khudaarta darayga ah ee ay sameysay hawada sanadkii la soo dhaafay waxay sare u kacday boqolkiiba 2018 marka la barbar dhigo 9. ”
Hong Kong ayaa kaalinta koowaad gashay $ 4 milyan 309 kun
Isagoo sheegay in dhoofinta ugu badan ee qudaarta iyo khudradda hawada ay tahay Hong Kong oo leh 4 milyan 309 kun oo doolar, wuxuu sheegay in Norway ay raacday Hong Kong oo ay ku jirtay 2 milyan 525 kun oo doolar halka Singapore ay heshay 1 milyan 656 kun oo doollar.
Dhoofinta Shiinaha ayaa gaadhay 1 milyan 337 kun oo doollar. Faransiiska, dhinaca kale, waxay ku jiraan booska shanaad iyagoo leh 1 milyan oo doollar xamuulkeena xamuulka ah. Iyada oo la balaarinayo shabakada duulimaadka ee Turkish Airlines, Shirkadda Cargo ee Turkishka waxay kordhineysaa saameynta ay ku leedahay suuqyada caalamiga ah, sidaa darteed shabakadaheena suuqyadu sidoo kale wey sii fidayaan. Dhoofinta loo yaqaan 'cherry dhoofinta', oo gashay kaalinta ugu horeysa ee dhoofinta miraha darayga ah iyo khudradda sanadkii la soo dhaafay 10 milyan oo doolar, ayaa kordhay 2018 boqolkiiba marka loo eego tirada iyo 23 boqolkiiba marka la barbar dhigo 53. Badeecadeena labaad ee ugu dhoofinta badan waxay ahayd boqoshaada 2 milyan 349 kun oo doolar. Dhoofinta dhoofinta, 2019 milyan 7 kun oo doolar ayaa dakhligii la helay 2 iyadoo korodh ah 569 boqolkiiba. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in dhoofinta cherry ee loo dhoofiyo Taiwan iyo Kuuriyada Woqooyi ay dhowaan furmay Shiinaha kadib, wuxuu yidhi, "Kahor masiibada, waxaan u qabnay laba mashruuc Ur-Ge oo loogu talagalay Shiinaha, South Korea, Malaysia, Singapore iyo Bariga Bari iyo Koonfur Bari Aasiya. South Korea, oo gashay Ururka Dhoofinta Qudaarta iyo Khudaarta, waxay hada sameyneysaa labo duulimaad wiiggii. ” ayaa yidhi.
Markii ugu horeysay 28 may
Maareeyaha Gobolka Cargo ee Turkiga Faik Deniz ayaa ku dhawaaqay in duulaan ku socdo Izmir la qorsheeyay maalin kasta 28ka Maajo.
"Haddii jirku ballaaran yahay, waxaan awoodnaa inaan u dirno Istanbul ilaa 30 tan. Tani waxay xoogaa yareyn doontaa baahida loo qabo karti. Maaddaama ay tahay wax soo saar xasaasi ah, waxaan mudnaanta koowaad siin doonaa miraha iyo khudaarta darayga ah ee awoodda. Haddii mugga ganacsiga uu kordho dhoofinta cherry ee Shiinaha, waxaan sameyn doonaa jaartarka ama duulimaadyada dheeriga ah. Sanadkan macquul maahan, laakiin waxaan u maleynayaa inaan awood u yeelan doonno hawlgallo istiraatiijiyadeed iyadoo ku xiran kordhinta baahida loo qabo sannadaha soo socda. Hawlgalkeenna oo dhan wuxuu si isdaba joog ah uga sii socdaa hal diyaarad. Dhibaatooyinka ayaa sii yaraan doona. Izmir, waxaan ka saarnay boorarkeena iyo xamuulkeena annagoo adeegsanay hanaan jeermis dilis ah kalluunka. Waxay ahayd jeermis ka hortag ah oo yaraynaysa saamaynta coronavirus-ka isla markaana sii hayn doonta muddo 30 maalmood ah. Waxaa ansixiyay Wasaaradda Caafimaadka, waa markii ugu horreeysay ee Izmir. Tani waxay sidoo kale ka hortagtaa faddaraynta isku-tirka. Fayrasku kama gudbayo. ”
Alaabada ayaa lagu rari doonaa diyaaradda iyagoon jabin silsiladda qabow
Faik Deniz, oo shaaca ka qaaday in keydka keydka qabow ee leh aag dhan 731 mitir murabac iyo 3 878 mitir cubic la dhameystiray bishii Febraayo, wuxuu yiri:
Baaxaddeeda, waxay la macno tahay in gobolka Izmir uu la kulmi doono baahiyaha 20-25 sano ee keydinta qabow. Markaan ku dari karno bakhaarada aan dib u cusbooneysiin karno, waxaan haysanaa ku dhawaad ​​4 kun oo mitir cubic oo kaydinta qabow. Markaan alaabada u gudubno Raajo, waxaa toos toos loogu geyaa bakhaarka xarkaha silsiladana lama jabin. Waxaan sidoo kale gaarsiinay dalabkeenna ku saabsan aaladda khaaska ah ee aan diyaaraddaha ka qaadan doonno. Alaabada ayaa lagu rari doonaa diyaaradda iyadoon la jabin silsiladda qabow. Bakhaarka ayaa u dhexeeya 0 iyo 8 digrii. Waxaan heysanaa qorshe loogu talo galay xasilinta wejiga labaad. Waxaan sameyn doonaa darajada xun. Waxaan ku fikirnay cimilada qabow mashruucii ugu horreeyay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka sameysid heerka jareerka hawada hawo qabow, waxay sameyneysaa faashad waana inaad u isticmaashaa qol gaar ah. ”
Duulimaad dheeri ah oo ku aaddan Kuuriyada Koonfureed ayaa ajandaha looga jiraa
Maareeyaha Guud ee Shirkadda Xamuulka Cargo ee Turkiga Turhan Özen ayaa yidhi, "Haddii ay jirto baahi loo qabo kordhinta safarada South Korea, waxaan taageernaa ku-darista illaa hal bil ugu yaraan muddadii cherry-gu uu noqon lahaa kan ugu mashquulka badan. Waxaan soo qaadaneynaa midhihii howlihii ay ku qabteen Ururradii Dhoofinta Aegean 3-4 sano. Markaan sii wadno kororkan, oo aan ku helnay bilowga dhoofinta cherry ee loo dhoofiyo Shiinaha bishii Juun ee sanadkii hore, waxaan sare u qaadi doonaa khudaarta cusub ee dhoofinta xamuulka. Diyaaradaheena rakaabka ayaa bilaabanaya bisha Juun. Waxaan xiriir la leenahay dhammaan waddamada adduunka. Nolosha shelf ee waxyaabaha sida khudradda cagaaran iyo khudaarta cusub way hooseeysaa qarashkuna wuu sarreeyaa. Sidaa darteed, waxaan si gaar ah ugu hawlgalnaa waaxyaha midhaha cusub marka la eego xagga awoodda iyo qiimaha. ” ayuu hadlay.
Qorshahan caadiga ah ee THY ayaa diyaar ah
Özen wuxuu sheegay in sanadkaan, qiimaha xamuul xamuul la habeeyay isla markaana qiimaha wakaaladaha qaaska ah lasiiyay wakiiladda, isagoo intaa raaciyay in loo sameeyay qorshe duulimaadyada rakaabka ilaa iyo bisha June.
Sababo la xiriira 'Covid-19' awgeed, dalal badan ayaa si tartiib tartiib ah u aqbalaya rakaabka caalamiga ah ee safarka caalamiga ah. Turkiga waxaa lagu sameeyaa mala awaalka ah in sii wadida isbadalada hoos udhaca ee labada dal ay uga shaqeeyaan hormarinta wadajirka xawaaraha. Qaybtayada rakaabka ah waxay u duulaan 320 meelaha loo dalxiis tago iyo 290 meelood meel caalami ah. Mar labaad waxay noqon doontaa heerarkan, sida Sebtember-Oktoobar. Waxay ku bilaabmi doontaa 50-60 waddan marka hore. Go'aanka waxaa lagu gaari doonaa inta ay oggol tahay Wasaaradda. Inta lagu jiro xilligan dhoofinta, qayb muhiim ah oo ka mid ah alaabadayada ayaan la bixin doonin maalin kasta, maalin kasta. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqda ah in duulimaadyada rakaabku ay la socdaan duulimaadyada xamuulka iyo xamuulku wuxuu ku socdaa rakaabka rakaabka. Waxay kuxirantahay safarada rakaabka. Qaybaha 23 diyaaradood ayaa bixiya adeeg xamuul. Marka la soo bandhigo 310 diyaaradood oo rakaab ah oo ka bilaabanaya bisha Juun, ajandayaal la awoodi karo oo dheeraad ah ayaa imaan doona ajandaha.
Waxaan ka shaqeynaa sidii aan u gaarsiin laheyn alaabadayada qaab caafimaad leh ”
Isagoo carabka ku adkeeyay in hagaajinta qiimayaasha meelaha qaar ay tahay in lagu dabaqo meelaha kale, Cengiz Balık, Gudoomiye kuxigeenka Gudiga Aegean Fresh Fruit iyo Ururka Dhoofinta Qudaarta ayaa sii waday sida soo socota:
Qorsheynta waa in la sameeyaa oo ku saabsan inta jeer ee maalmaha iyo safarada loogu talagalay dadka safarka ah sida Indonesia, Taiwan, Cambodia, Kuala Lumpur. Qodobbada kale ee muhiimka ah waa bixinta gawaarida qabow ee wax soo saarka, daahitaanka diyaaradaha, sugida iyo garoomada diyaaradaha qabow. Diyaaradda gudaheeda hoostiisa, baalasheeda hoostood sug ilaa 2 saacadood inta lagu gudajiro. Maaddaama ay hawadu kululaato, waxay u sameyneysaa curyaanno halis ah alaabteenna. Waxaan isku dayi doonnaa inaan ku ilaalinno alaabadayada dabool kuleylka. Waxaan si wada jir ah uga wada shaqeynaa sidii loo hubin lahaa in badeecadeena ay ku gaarto macaamiisheena qaab caafimaad qab ah. Waa muhiim in la furo garoonka diyaaradaha Adnan Menderes. Gobollada aan u dhoofinno, waa inaanu alaabadayada u rarnaa garoonka diyaaradaha ee hore ee Istanbul ee Ataturk. Aad ayey muhiim u tahay markii aan xamuulkeena geyno garoonka diyaaradaha Adnan Menderes, inay halkaas tagto kastamyada. Haddii khadadka guduhu bilaabmaan, xaaladdan waa la xallin doonaa. ”
Maareeyaha Adeegga Macaamiisha Cargo ee Turkiga Mustafa Asım Subaşı ayaa sheegay in hawlgallada dhulka hoostiisa ka jira uu yahay isku xirka ugu muhiimsan silsiladda, iyo in bustaha kuleylka ah ay yareynayaan isbeddelka waxyaabaha loo dhoofiyo waddamada kulul.
Diyaarinta Turkiga Diyaargarowga Guriga Cusub
Diyaargarowga dillaaca adeegyada mitrooga iyo taraamyada ee İzmir
Turkiga Mashiinka Mashiinka Mashiinka InnoTrans waxay soo xaadirtay 2012 Fair
Khadka Laynka Uludag 31 wuxuu bilaabmayaa tijaabooyinka bisha Maarso
Adare ayaa billaabay duulimaadyada lacagta loo bixiyo
17 si ay u bilawdo duulimaadyada Aday ee bisha June
Burulaş waxay bilawday adeegga basaska ee degmooyinka
Basaska darawaliinta ee UK
Rugta Ganacsi ee Baay
Daadka Deegaanka oo ka bilaabanaya Lake Van
Tareenka Turkiga wuxuu ka baxayaa Izmir